Colossus - एक ... के शब्द "Colossus" गर्छ?
शब्द "Colossus" आजकल लगभग सबैतिर प्रयोग। विशेष, यो खेल र चलचित्र उद्योग मा साधारण भएको छ। तथापि, सबैलाई के Colossus को अर्थ थाह छ। Colossus - एक विशाल विशाल मूर्ति। त्यहाँ अर्को अर्थ छ। Colossus एक व्यक्ति वा यसको आकार वा महत्व मा उल्लेखनीय छ वस्तु छ।
वास्तुकला मा Colossus
मूलतः, शब्द "Colossus" भारी आकार को मुर्ति परिभाषित जो एक वास्तुकला अवधारणा छ। आजको संसारमा यसलाई अवस्थित लेख को एक ठूलो संख्या ज्ञात छ, र नष्ट गरेको छ, वा केवल अनुमान।
पहिलो ज्ञात Colossus - एक रोड्स को Colossus, को छ जो संसारको सात आश्चर्यहरू। यो मुर्ति जहाज रोड्स को द्वीप को पोर्ट मा पौडी खेल्न जहाँ एक ठाउँमा उभिए, र यसको मुख्य विशिष्ठ सुविधा 36 मीटर को भारी उचाइ छ। तर यो वर्ष मात्र 65 लिए, र भूकम्प पछि, मूर्ति नष्ट भएको थियो। यो रोड्स जफत गर्ने अरब बेचिएको थियो सम्म एक भन्दा बढी हजार वर्ष यसको भाचिएको बस्तु राख्नु।
आजको संसारमा सबै भन्दा ठूलो Colossus - एक स्वतन्त्रताको प्रतिमा, अमेरिका मा जो खडा। मुर्ति को टर्च को टिप गर्न जमीन देखि - 93 मीटर, तर एकै समयमा, हामी मुर्ति नै को हाइट्स कुरा भने, यो 46 मिटर छ। यो मुर्ति क्रांति को Centennial गर्न फ्रान्सेली नागरिकहरु अमेरिका को वरदान हो भन्ने तथ्यलाई टिप्पण लायक छ।
पनि Memnon को विशेष ध्यान Colossi जो फिरऊन Amenhotep III को सम्मान मा बनाएको दुई विशाल ढुङ्गा मूर्तिहरू छन् दिनुपर्छ। मूर्तिहरू नो को necropolis को क्षेत्र मा खडा, शहर 3400 अधिक वर्ष को लागि छ। 700 टन वजन भएको मूर्तिहरू को उचाइ, खातामा लिएर ढुङ्गा मंच 18 मीटर छ यसलाई तिनीहरूले बस मा डुबेर मर्छन् रूपमा, नदी स्रोतहरू प्रयोग बिना जमीनमा 670 किमी को दूरी गर्न ओसारपसार थिए भन्ने तथ्यलाई टिप्पण लायक छ। समय को प्रविधि दिइएको, यी मूर्तिहरू साँच्चै अत्यन्तै प्रयास गर्न थियो सार्न।
घरेलु Colossus ठाउँ लिन छैन ...
बीच अनुमान ठूलो Colossus को छत मा स्थापित गर्न जाँदै छ जो, लेनिन को एक मूर्ति हुन मानिन्छ थियो रूसीहरूले को महल। तर, संग दोस्रो विश्व युद्ध को प्रकोप, र माध्यमिक परिस्थितिमा एक नम्बर स्थान वा दरबार, कुनै मूर्तिहरू निर्माण लिएनन्।
यसरी, यो मूल परियोजना रूसीहरूले को महल स्थापित भएको थियो जो मा, तर त्यसपछि ढुङ्गा ब्लक, मूल Colossal वस्तु निर्माण जारी राख्न अभिप्रेरित थिए, रूपमा प्रयोग गरिएको छ मात्र ठूलो जग बनाइएको थियो विरोधी urchins, को अग्रिम सेना देखि मास्को रक्षा गर्न प्रयोग गरियो जो। युद्ध पछि परियोजना को लडी कारण यो देश पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक थियो भन्ने तथ्यलाई गर्न स्थिर गरिएको थियो।
को Marvel ब्रह्माण्ड मा Colossus
अविश्वसनीय शारीरिक क्षमता छ कि एक सुपर हिरो - Marvel Colossus को ब्रह्माण्डकै। यो Colossus को षड्यन्त्र Petr Nikolaevich Rasputin को नाम ले एक रूसी छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। यो चरित्र मुख्य विशेषता यो पूर्ण इस्पात कवर, एक इस्पात मोल्ड लिन विशाल शक्ति दिन र वस्तुतः invulnerable बन्न सक्नुहुन्छ।
इस्पात Colossus वजन उहाँले 200 टन उचाल्न सक्छ, को रूप पानी र खाना आवश्यक छैन, र पनि सामना तापमान कुनै पनि कठिनाई बिना अविश्वसनीय धीरज विशेषता। यस मामला मा, त्यो एक इस्पात मोल्ड परिणत गर्न आवश्यक जब Colossus छनोट। तर, कुनै पनि कारण लागि उहाँले चेतना गुमाउनु भने, त्यसपछि तुरुन्तै यसको मुख्य कमजोरी को छ जो एक मानव, फिर्ता गर्दछ। अन्य कुराहरु Colossus अक्सर चाँडै घाउ कस र रक्तस्राव रोक्न यसको आकार प्रयोग गर्दछ, मानव फारममा आफ्नो रहन समयमा प्राप्त।
"को Colossus शासक"
"को Colossus शासक" - यो त्यहाँ "लुकेका वस्तु" को विधा को तत्व हो जसमा एक ऐतिहासिक रणनीति छ।
खेल प्रारम्भिक भेला साधनहरु र खाना, प्लेयर विभिन्न स्थानहरू अन्वेषण गर्नुपर्छ जो संग हुन्छ। अध्ययन को यो चरण पहिले नै विभिन्न प्रविधिहरू, साथै खेत भवनहरु को एक सक्रिय निर्माण शुरू भएको छ पछि। सबै गौण र प्रमुख कार्यहरू प्लेयर महिमा हुन्छ मात्र पछि, उसलाई सधैंभरि रहन। तसर्थ, खेलाडी तपाईंको आफ्नै शक्तिशाली साम्राज्य, खुला आधुनिक प्रविधि निर्माण गर्न र बस छैन रोड्स को Colossus र संसारको आश्चर्य आफूलाई निर्माण गर्न के थाहा हुनेछ।
यसको analogues देखि खेल भेद कि सुविधाहरू बीच, आकर्षक ग्राफिक्स र एनिमेसन, साथै आनन्द गेमप्लेको र आश्चर्य को एक एकदम ठूलो संख्या गर्नुपर्छ। केहि अलग्गै, खेल "को Colossus को शासक" को लागि खेलाडी परिचय हुनेछ प्राचीन विश्व को इतिहास।
खेल "को DCS अनुसूचित जाति-50: काला शार्क"
कसरी "Maynkraft" नक्शा गर्छन् र कसरी यसलाई विस्तार गर्न?
को osu कसरी खेल्ने? संगीत ताल खेल osu: समीक्षा
ड्रागन आयु: आधिकारिक जाँच - सिस्टम आवश्यकताहरु र जारी मिति
ला Noire सुरु हुनेछ: कसरी हुन?
को ख्रुश्चेव मा छत उचाई: असामान्य लेआउट
अंग्रेजी सिक्न छिटो र सजिलै
कोइटस हो ... कोटसको प्रकार र विशेषताहरू
टम हार्डी फिलिम क्रेडिट
मेट्रो विशेषताहरु (प्राग)
"द टावर" (Tarot): कार्ड को मूल्य, को व्याख्या